होस अन्निका | Hultsfred मा जानुहोस्
हेम » खानुहोस् र पिउनुहोस् » रेस्टुरेन्ट » होस अन्निका
राम्रोसँग पकाइएको खाना ठूलो मात्रामा स्विडेनी सामग्रीबाट। रेस्टुरेन्ट निजी पार्टीहरूको लागि बुक गर्न सकिन्छ, यो खानपान प्राप्त गर्न पनि सम्भव छ। अन्निकाको संगीतमा ठूलो रुचि छ जुन भविष्यमा रेस्टुरेन्टमा पनि महसुस हुनेछ। खाना र संगीतको मजा लिन हार्दिक स्वागत छ!
सोमबार: बन्द छमंगलबार: १०:०० देखि १:11:०० सम्मबुधबार: १०:०० देखि १:11:०० सम्मबिहीबार: १०:०० देखि १:11:०० सम्मशुक्रवार: १०:०० देखि १:11:००शनिबार: बन्द छआइतवार बन्द
इन्डस्ट्रीगटन 3, 577 39 हल्ट्सफ्रेड, स्वीडेन
हामी उत्तरतिर जाँदै थियौं र हल्ट्सफ्रेड नजिक पुग्यौं जब यो खानाको समय थियो। हामीले यो सानो मणि भेट्टायौं र एक महान लंच (आइसक्रीम वा बीफ स्टू) थियो। त्यो को शीर्ष मा, एक fantastically मैत्री स्वागत छ। उज्यालो मोमबत्ती र सानो टेरी तौलिया संग राम्रो शौचालय को लागी अतिरिक्त प्लस।
एउटा जरूरी छ यदि तपाइँ सडकहरु अतीत छन्! धेरै राम्रो खाना, राम्रो कोठा र उत्कृष्ट सेवा। हामी पक्कै यहाँ फेरि आउनेछौं!
मेरा प्यारो साथीहरू र म खानाको एक टुक्राको लागि भोको थियौं। हामीले होस अन्निकामा खाने निर्णय ग .्यौं। जब हामी त्यहाँ पुग्यौं, अन्निकाले हामीलाई मायालु स्वागत गरे। हामी टेबल टेक्लोमा टेबुल कपडा र मैनबत्तीहरू सहित बसेका थियौं। अन्निका टेबलको अन्त्यमा उभिएर खाना प्रस्तुत गरिन्। हामीसँग घर बनाउने हेरि,, आलुहरू र सुरुवातीहरूको लागि सलाद र मुख्य पाठ्यक्रमको लागि चामलको साथ कुखुरा स्टू पायौं। सबै धेरै राम्रो थियो।
यदि तपाइँ सडकहरु पार गर्नुभयो र भोकाउनुभयो, तपाइँ Annika को याद गर्नुहुन्न। धेरै राम्रो खाना, राम्रो स्वागत र सफा र सफा।
राम्रो खाना र राम्रो ठाउँ।